KISS: सरल जीवन सफल बस्ने कुञ्जी हो
शुक्रबार, फेब्रुअरी 5, 2010 मङ्गलबार, अप्रिल 1, 2014 ट्रेविस स्मिथ
कलाकार र चित्रकार निक देवर यस हप्ता निधन भयो। उनले धेरै बिभिन्न कम्पनीहरूका लागि काम गरे अटलांटिक मासिक र्यान्डम हाउसमा, लेख वा पुस्तकमा रोचक शब्दहरूको अन्तर्दृष्टि उदाहरण प्रदान गर्दै। मेरो मनपर्ने निक Dewar काम मेरो व्यावसायिक र व्यक्तिगत दर्शन दुबै चित्रण गर्दछ:
सरल जीवन सफल जीवनको कुञ्जी हो.
यो परीक्षण गरिएको KISS विधिको अधिक पेशेवर र प्रख्यात रिफ्रेसिंग हो:
होइन, त्यो KISS होईन -
KISS सिद्धान्त - "यसलाई सरल राख्नुहोस्, मूर्ख?"
यी दुबै ओकामको रेजरको आधुनिक व्याख्या हो, जो भन्छन? अस्तित्वलाई आवश्यकता भन्दा बढि गुणा गर्नु हुँदैन ,? वा अधिक सामान्यतया, 'सरल रणनीति सबै भन्दा राम्रो एक हुन्छ।?
त्यसोभए म तपाईंलाई किन भनिरहेको छु? म किन १ 14 औं शताब्दीको दार्शनिक, एस फ्रेहली र भर्खरै मरेका स्कट्सम्यानलाई ब्लगमा तान्दै छु? किनभने हाम्रो छिटो-गति, उच्च-टेक, सँधै समाजमा, हामी सरल समाधानहरूको साथ समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयास गर्न बिर्सन्छौं। प्राय जसो सबैले नयाँ प्रविधि वा समस्या समाधान गर्न नयाँ तरिका खोज्दैछन् जब हामी सरल समाधानहरू प्रयोग गर्न सक्छौं जुन थोरै खर्चको आवश्यक पर्दछ र राम्रो दीर्घकालीन लाभहरू प्रदान गर्दछ।
यस दर्शनले उत्पादका सुविधाहरूमा पनि बोल्दछ। केवल किनभने तपाईंको उत्पादसँग बढि सुविधाहरू छन् यसको मतलब यो होइन कि यसले तपाईंको ग्राहकहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ। यदि तपाईं आफ्नो ग्राहकहरु को बारे मा बुझ्नुहुन्छ भन्ने महसुस गर्नुहुन्छ भने? आवश्यक छ, तपाईंसँग ठूलो, अधिक मौलिक समस्या छ जुन कार्यान्वयन सुविधाहरू भन्दा। तपाईंले आफ्नो प्रयोगकर्ताहरू, ग्राहकहरू र आफैंलाई अझ राम्रोसँग बुझ्नु आवश्यक छ। केवल लक्षणहरूको उपचार नगर्नुहोस्। यसलाई सरल राख्नुहोस्, र वास्तवमै के हुँदैछ पत्ता लगाउनुहोस्। र याद गर्नुहोस् -
ओह, र यो पनि सम्झनुहोस् कि KISS पनि धेरै मीठो छ!